Ixesha leTrade: Vumela iiNkokeli ziCwangcise ukuTyunjwa okulandelayo! | Martech Zone
Ixesha leTrade: Vumela iiNkokeli ziCwangcise ukuTyunjwa okulandelayo!
NgoMgqibelo, Matshi 9, 2013 NgoMgqibelo, Matshi 9, 2013 Douglas Karr
Ndisena krakra ngokuginya kweBlackberry Ihlathi kwaye emva koko uyibulale. Esi sisixhobo esimnandi endingakhange ndikwazi ukusibuyisela… kude kube ngoku. Ndenzekile kwisiza ebesisebenzisa Cofa ixesha leTrade kwiShedyuli Inqaku kwaye wafumanisa itekhnoloji ekufuneka yabelwe.
Utyalomali oluncinci endilenzayo Ixesha elifanelekileyo kufanelekile kuba ishenxisa ingxoxo nasemva kunye nabaxumi bam okanye ithemba ekuchongeni umhla kunye nexesha lokudibana. Inkqubo ithatha ukusebenza kwaye iyomeleza ngephakheji yayo yenkulumbuso, nangona kunjalo, ikuvumela ukuba ubeke ifayile ye- Cofa kwiShedyuli iqhosha ngqo kwiwebhusayithi yakho! Eli luphawu olukhulu olunokunyusa ukuguqulwa njengamanqaku eTimeTrade apha ngezantsi:
Amathemba abandakanyeka ngokucwangcisa umnxeba omfutshane wolwazi okanye uncedo lokuthengisa afaneleke ngakumbi kwaye alungele ukuba nengxoxo yokuthenga. Oku kunciphisa umjikelo wentengiso ngokutsiba "phezulu" kwefaneli yokuthengisa kwaye ufumane ilungelo lokusebenza nenkqubo yokuthengisa. Abathengi beTimeTrade bahlala bebona ukonyuka kwama-25% okanye nangaphezulu kuthengiso-lokuthengisa kunye nokunciphisa imijikelezo yokuthengisa nge-40% okanye nangaphezulu.
Ke ilizwe elinethemba lokungena kwindawo yakho kwaye unomdla Endaweni yokungenisa ifom yesicelo, bacofa ukucwangcisa kunye nokucwangcisa ukuqeshwa okuhanjiswe ngokufanelekileyo kumntu olungileyo kwiqela lakho. Ipholile kangakanani loo nto? Akukho ngxabano, akukho mxholo… ikhalenda yakho ihlaziywa, i-CRM yakho yokuthengisa iyahlaziywa, kwaye umkhankaso wakho wokukhulisa oomatshini ngoku sele uqalile Konke oku kuyenziwa ngaphandle kokuba nabani na kwinkampani yakho aphakamise umnwe!
Ixesha leTrade lidityaniswa ngokuthe ngqo neKhalenda kaGoogle, Hubspot, Marketo, Eloqua kunye neNtengiso. Akunakuphela nje ukuba izikhokelo zakho zibeke ukuqeshwa, kodwa ulwazi lwabo kwiCRM yakho okanye iqonga lokuthengisa ngokuzenzekelayo liya kuhlaziywa kwakhona!
tags: Cofa ukuze ucwangciseixesha
Kutheni iSicwangciso-qhinga sakho seNtengiso esiPhumayo sisilela
Mar 10, 2013 ngo-5: 33 AM
Ndiyathanda ukurhweba ngexesha, umsebenzi olungileyo.
Mar 18, 2013 ngo 2:29 PM
Hee Doug, enkosi ngovavanyo oluhle. Masixelele ukuba wena okanye nabani na unemibuzo kwi-TimeTrade!
Okt 8, 2014 ngexesha 6:41 AM
Ixesha loRhwebo luneziphene ezinzulu njengemveliso kunye nenkampani. Esona sizathu siphambili sokuba abantu bafune imveliso enje ukuvumelanisa –ukuze abathengi bakwazi ukuya kwiwebhu, ishedyuli yokuqeshwa, yiyo loo nto. Ukuvumelanisa ngokupheleleyo akukho, nangona kunjalo, ubuncinci kwikhalenda. Andikwazi ukucima ukuqeshwa kwiKhalenda kwaye ndibacime kwiTimeTrade. Kuya kufuneka ndiye KWI-TIMETRADE SITE ukulawula ikhalenda yam. Ndibonisile ukuba le ayisiyo "sync" - ukuba "ukuvumelanisa" kuthetha "ukuvumelanisa" kodwa akukho nkxaso Xa ndacela ukubuyiselwa imali ngokuyinxalenye njengoko le yayiyinto ebhengeziweyo, ndaxelelwa ukuba isivumelwano asivumeli ukubuyiselwa kwemali. Luhlobo luni lwenkampani olunika iimpendulo zabathengi ezinjalo? Ndiza kuyishiya i-TimeTrade wakuba unyaka wam uphelile. Musa ukuyithenga le mveliso.
Novemba 24, 2014 ngo-9: 57 PM
Esi sixhobo sinento eninzi ephathekayo kodwa siluncedo kwaye sisebenza ngaxeshanye. Ixesha lokurhweba lenze umsebenzi olungileyo ekuyileni le nto ipholileyo. Azisekho iinkxalabo ekucwangcisweni kwexesha lokuqeshwa. Lo mgca uthi konke, "Ke ayizukukhokela kuphela ukuseta kwakho, kodwa ulwazi lwabo kwiCRM yakho okanye iqonga lokuthengisa ngokuzenzekelayo liya kuhlaziywa ngokunjalo!".